Semalt विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्: के यो Google मेरो व्यवसायको लागि Google पोष्टहरू प्रयोग गर्न लायक छ?
Google मेरो व्यवसाय साना व्यवसायहरूको लागि उपलब्धको साथ, अब तपाईं सक्रिय रूपमा स्थानीय एसईओ खोज ईन्जिन अनुकूलन सेवाहरूको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, माइकल ब्राउन आश्वासन दिन्छ कि एप्लिकेसनले एसएमईलाई एक नि: शुल्क खाता सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जहाँबाट उनीहरू कसरी तिनीहरूको व्यवसाय अनलाइन देखा पर्दछ व्यवस्थित गर्न सक्दछन्।
कसरी गुगल पोष्टहरू कार्य गर्दछ
गुगल मेरो व्यवसाय मा काम पोष्ट गर्न को लागी धेरै सरल छ। मेरो व्यवसाय ड्यासबोर्डमा लग इन भएको बेला, "पोष्टहरू" क्षेत्रमा नेभिगेट गर्नुहोस् जुन स्क्रिनको बाँया पट्टि हुनुपर्छ। त्यहाँबाट एक नयाँ पोष्ट सिर्जना गर्न विकल्प छ। व्यवसायहरूले पोष्टहरू निम्नको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ:
दैनिक विशेष वा नयाँ पदोन्नतीहरू घोषणा गर्नुहोस्
कुनै पनि नयाँ वा आगामी घटनाहरूको प्रचार गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने उत्पादनहरू वा नयाँ प्रविष्टिहरू हाइलाइट गर्नुहोस्
गुगल पोष्टहरू प्रयोग गर्ने कि होईन?
गुगल पोष्टहरूको प्रयोगको फाइदा निश्चित गर्न अझै गाह्रो छ किनकि यो अझै अपेक्षाकृत नयाँ छ। यो साइट दृश्यता गणना गर्न सम्भव छैन, र गुगलले पोष्टको सीमिततालाई पूर्ण रूपमा परीक्षण गरेको छैन। जे होस्, यो पोस्ट सिर्जना गर्न सजिलो र स्वतन्त्र छ जसले देखाउँदछ कि यसले ठूलो सामर्थ्य छ।
गुगलको उत्तम अभ्यासहरू
गुगललाई चिन्ता गर्ने सबै कुराको रूपमा, त्यहाँ केही उत्तम अभ्यासहरू छन् जुन उनीहरूको पोष्टहरू सिर्जना गर्ने र प्रबन्ध गर्ने क्रममा पालना गर्नुपर्छ।
भाषा जस्ता प्रचार र बिक्रीको दुरुपयोग गर्नबाट जोगिनुहोस्
गुगलले चलाखी भाषाको प्रयोग गर्न निषेध गर्दछ जस्तै एक छुट प्रदान गर्नेलाई "BOGO %०% छुट !!!" उनीहरूले यसलाई स्प्याम्मी विज्ञापनको रूपमा व्यवहार गर्छन्। यदि खोज एल्गोरिदमले त्यस्ता पोष्टहरूका ह्विफ प्राप्त गर्दछ भने, तिनीहरूले यसलाई हटाउँछन् र मालिकलाई दण्ड दिन्छन्। एकले ग्राहकलाई जैविक जानकारी बेच्नको अवसरको प्रयोग गर्नुपर्दछ जसले तिनीहरूलाई जागिरमा हालसालै के गर्छ भनेर सावधान गराउँदछ।
सकेसम्म धेरै जानकारी समावेश गरेर प्रत्येक पोष्टमा वर्णनात्मक हुनुहोस्
Google ले जानकारी खाली गर्न धेरै खाली फाँटहरू प्रदान गर्दछ, यो उनीहरूको सकेसम्म धेरै जानकारी भर्ने सुनिश्चित गर्न व्यावासायिकमाथि छ। आँखा लिने हेडलाइन्स र राम्रो ध्यान केन्द्रित छविहरूले प्रयोगकर्ताको ध्यान खिच्न र साइटमा ड्राइभ गर्न मद्दत पुर्‍याउनु पर्छ। कहिलेकाँही, ग्राहकहरूले पोष्टको बारेमा विस्तृत सामग्री भेट्टाउँछन्। यसका अतिरिक्त, अधिक जानकारीमा, अल्गोरिदम क्रोल हुने सम्भावना बढी हुन्छ प्रासंगिक कुञ्जी शब्द क्याप्चर गर्दछ।
समयमै र व्यक्तिगत
प्लेटफर्मको माध्यमबाट पोष्टहरूले समय-सम्वेदनशील मामिलाहरूमा जानकारी दिनु पर्दछ। जब तिनीहरू सान्दर्भिक हुन रोकिन्छन्, त्यहाँ स्थायी रूपमा मेटाउने विकल्प हुन्छ, वा तिनीहरूलाई अर्को उद्देश्यको लागि सेवा गर्नका लागि सुधार गर्नुहोस्। पोष्टहरूको साथ व्यक्तिगत लिनु सुनिश्चित गर्दछ कि स्थानीय लक्षित श्रोताको लागि एक निश्चित अपील छ।
स्थानीय SEO योजना बेवास्ता नगर्नुहोस्
खोज रैंकिंग एक निरन्तर प्रक्रिया हो र त्यसैले स्थानीय खोज इञ्जिन अनुकूलन सेवाहरू कायम राख्न प्रयास गर्नु पर्दछ। यसको मतलब अधिक लि links्कहरू आकर्षण गर्ने, स्थानीय उपभोक्ताहरूको लागि स्पष्ट सामग्री उत्पादन गर्न, र सकारात्मक समीक्षा स collecting्कलन गर्नु हो।
त्यहाँ केहि बताईएको छैन कि कसरी पोष्टहरू साना व्यवसाय मालिकका लागि उपयोगी हुन्छन् तर उनीहरूको ब्रान्डका लागि घटनाहरूको प्रस्ताव, प्रस्तावहरू, र समाचारहरूको साथ मद्दत गर्न सक्दछन्।